Ubume be-Church of United Pentecostal
I-United Pentecostal Church ikholelwa ekubeni ubunye bukaThixo endaweni yoBathathu Emnye . Le mbono, kunye "nomsebenzi wesibini wenceba" ekusindisweni , kunye nokungavumelani malunga nomgaqo wobhaptizo , kukhokelela ekusekeni kwecawa.
Inani lamalungu omhlaba wonke:
I-UPCI inamabandla angama-4,358 eNyakatho Melika, abafundisi abayi-9,085 kunye nokuhamba kweSonto kwi-646,304. Ehlabathini lonke, umbutho ubalwa ubulungu obungaphezu kwezigidi ezi-4.
Ukusekwa kweChurch Pentecostal Church:
Ngo-1916, abafundisi be-156 bahlula kwi- Assemblies of God kwiimbono eziphikisanayo ngobunye bukaThixo nobhaptizo lwamanzi egameni likaYesu Kristu . I-UPCI yakhiwa ngokuhlanganiswa kwePentekoste yeSonto Inc kunye neePentekoste Assemblies zikaYesu Kristu, ngo-1945.
AbaPhambili beCawa yamaPentekoste abamanyeneyo:
URobert Edward McAlister, uHarry Branding, u-Oliver F. Fauss.
I-United Pentecostal Church isebenza kumazwe angama-175 kuwo wonke umhlaba, ngekomkhulu eHazelwood, eMissouri, eU.SA.
IQumrhu Elilawulayo LamaQumrhu e-United Kingdom:
Isakhiwo sombutho sakha urhulumente we-UPCI. Iicawa zendawo zizimeleyo, zikhetha umfundisi wazo kunye neenkokheli, ziphethe impahla yazo, kwaye zibeka uhlahlo lwabiwo-mali kunye nobulungu.
Intlangano ebumbini yecawa ilandela inkqubo ye-presbyterian, kunye nabaphathiswa beentlanganiso kwi-sectional-district kunye neenkomfa eziqhelekileyo, apho banyula amagosa baze babone ishishini lebandla.
Umbhalo Oyingcwele okanye Okwahlukanisa:
Ngokuphathelele iBhayibhile, i-UPCI ifundisa, "IBhayibhile yiLizwi likaThixo , ngoko ke lingenamandla kwaye lingaphiliyo. I-UPCI iyalahla yonke imvelaphi yeemfundiso kunye neembhali, kwaye ijonga iimfundiso zecawa kunye namaqendu okholo nje njengengcinga yabantu."
Iyabonwa ngabaPhathiswa beCawa yamaMonto ePentekoste kunye namalungu:
UKenneth Haney, oyiNtloko-ngqongqoshe; UPaul Mooney, uNathaniel A.
Urshan, uDavid Bernard, u-Anthony Mangun.
Iintenteko ze-United Pentecostal Beliefs and Practices:
Inkolelo eyahlukileyo ye-United Pentecostal Church iyimfundiso yayo yobunye bukaThixo, into echasene noBathathu Emnye. Ubunye kuthetha ukuba endaweni yabantu abathathu abahlukeneyo (uBawo, uYesu Kristu , noMoya oyiNgcwele ), uThixo ungomnye, uYehova, obonakalisa njengoBawo, uNyana, noMoya oyiNgcwele . Ukuthelekiswa kuya kuba yindoda eyaziwayo, yona, indoda, unyana kunye noyise ngexesha elifanayo. U-UPCI ukholelwa ekubhapathizweni ngokucwiliswa, egameni likaYesu, nangokuthetha ngeelwimi njengophawu lokufumana uMoya oyiNgcwele.
Iinkonzo zonqulo kwi-UPCI zibandakanya amalungu ethandaza ngokuvakalayo, ephakamisa izandla ekudumiseni, ekubetheni, ekumemeza, ekuhlabeleleni, ekungqineni, nasekudleni eNkosini. Ezinye izinto ziquka ukuphiliswa kukaThixo nokubonisa izipho ezingokomoya . Benza iSidlo seNkosi kunye nokuhlamba iinyawo.
Iicawa zaseManyeni zePentekoste zitsho amalungu ukuba aphephe iifilimu, ukudansa kunye nokubhukuda kwabantu. Amalungu amabhinqa ayatshelwa ukuba angagqoki iinqwelo okanye abe neengalo ezingavaliyo, kungekhona ukusika iinwele okanye ukugqoka iimpahla okanye iingubo zokugqoka, ukugqoka iingubo ngaphantsi kweedolo, nokugubungela iintloko. Amadoda adangelekile ukuba agqoke iinwele ezide ezithintela ikoleni yekhati okanye ezifihla iintloko zeendlebe zazo.
Zonke ezi zijongwa njengempawu zokungahloneli.
Ukuze ufunde okungakumbi ngeenkolelo zeCawa yamaPentekoste, tyelela i- UPCI Believes and Practices .
(Imithombo: upci.org, jonathanmohr.com, ReligiousMovements.org, kunye ChristianityToday.com)
Ubugcisa bokuwa kwiiSatifikethi ezisezantsi
Litha Legends noLore
Isikolo seParyer: Ukwahlukana kweCawa noRhulumente
Faka ngokufanelekileyo i-Dates kwi-Excel kunye nomhla we-DATE
Ikholeji ye-Ringling ye-Art and Design Admissions